I-China ENTSHA I-Ultra slim i-Aluminiyam yangaphandle izibane zesikhukula 30W 50W 100W 150W 200W 300W abavelisi bezibane ezikhokelwa zizikhukula kunye nababoneleli | Kasem
ENTSHA I-Aluminiyam enciphileyo yeAluminiyam yangaphandle ukukhanya 30W 50W 100W 150W 200W 300W isibane esikhokelwa zizikhukula
Inombolo yomzekelo: SF-50W
Isibane esiLuminous Flux(lm): 4000
Ubushushu bokusebenza(℃): -20 ~+ 50
Igama leMveliso: Led Floodlight
Umba: Smd LED Ukukhanya koKhukula lwangaphandle
Uhlobo: Ugcino Amandla oMbane waNgaphandle weLed yeSikhukula soKhanya
Itshiphu ye-LED: SMD2835
Ubushushu boMbala (CCT): 2700 ~ 6500K
Ukusetyenziswa: Ngaphakathi/Ngaphandle kwe-LED IP65 Floodlight
Uphawu: Ukukhanya okuphezulu
Isixhobo: iAluminiyam+Iglasi epholileyo
Umthombo wokukhanya kwe-LED: Sanan
UkuSebenza okuLuminous(lm/w): 90-100
Okuqaqamba Kakhulu:Ukukhanya okukhukula kusebenzisa iitshiphusi ze-LED ezikumgangatho ophezulu, i-angle ye-beam eyi-140 °, akukho thunzi kunye nokuchasana nokuvutha. Isibane sesikhukula se-150W se-LED sinokutshintsha ngokugqibeleleyo isibane se-halogen ye-1000W yesiqhelo, sigcine i-80% yetyala lombane.
Ubomi obude: Icala elingasemva lithatha uyilo lokuphelisa ubushushu, elonyusa indawo yokudibana komoya, isantya sokuchitha ubushushu, kwaye yandisa ubomi benkonzo yokukhanya kwezikhukula.
Ukhuseleko kunye nokungangeni kwamanzi:Yenziwe ngendlu ye-aluminiyam yokufa kunye nelensi yePC. Ilensi yePC inesakhiwo esikhethekileyo sokukhanya, ukukhanya okufanayo, umgama omde, akukho lula ukuwuqhawula, inqanaba elingangeni manzi le IP66, lilungele ukukhanyisa ngaphakathi nangaphandle.
Kulula ukuyisebenzisa kunye nesibiyeli esomeleleyo:Isibane sesikhukula sineplagi kunye nocingo oluphantsi, amandla ombane osebenzayo (110V AC) . Isibane somkhukula sinesibiyeli sentsimbi esandisiweyo nesijiyileyo, unokusifaka ngokulula eludongeni, eludongeni, emgangathweni nakwezinye iindawo ngokulungelelanisa ii-engile ezahlukeneyo.
Iwaranti:Sinikezela ngewaranti engenaxhala leenyanga ezingama-24. Ukuba unemibuzo okanye iingxaki ezisemgangathweni malunga nemveliso, unokuqhagamshelana nathi nge-imeyile, kwaye siya kucombulula ingxaki kuwe kwiiyure ezingama-24.
Umzekelo No Amandla/W Ubungakanani bokukhanya Iichips ze-LED Into evikela amanzi PCS/CTN Ukupakisha ubukhulu
• Isibane esiphuma phezulu kakhulu sesikhukula sikuzisela ubusuku obukhuselekileyo obunokukhanya okuqaqambileyo okungama-80 lumen/watt.
• Kulula ukuyifaka kunye ne-slid yayo, i-180-degree adjustable mounting bracket.
• Indlu eyomeleleyo neyomeleleyo ye-aluminiyam ye-die-cast kunye neglasi epholileyo zenza umgangatho obalaseleyo.
• Ukukuzisela ukukhanya okungcono, okungabizi kakhulu, nokunempilo kune-incandescent yakho yangaphambili, izixhobo zehalogen.
Uyilo lokupholisa ngokukhawuleza kunye neentlobo ezimbini zeglasi
Izindlu zenziwe nge-aluminium efayo, ekwazi ukufunxa ubushushu obuveliswa ngokufanelekileyo zii-LEDs, ngaloo ndlela inyusa ixesha lokuphila kwee-LEDs. Ubume be-convective ngasemva kwendlu buchitha ubushushu ngokufanelekileyo. Zonke ziyilelwe injongo yokukhupha ubushushu ngokukhawuleza.
I. Qhagamshela iintambo ezi-3 kwindawo ehambelanayo yomthombo wamandla: L(brown) ukuya kucingo olushushu; N(Blue) ukuya kwiNtetho yocingo; (mthubi/luhlaza) ucingo kucingo lomhlaba. Nceda uqinisekise ukuba zonke iingcingo ziqhagamshelwe ngokuchanekileyo xa uyifaka.
II. Lungisa ukukhanya eludongeni okanye kwipali enezikrufu (ezingabonelelwanga) okanye ezinye iindlela.
III. Emva kokugqiba ukufakela, vula kwaye uqale ukusebenzisa.
Ukusetyenziswa okuqaqambileyo kakhulu kunye nosetyenziso olubanzi
I-High Performance LED Outdoor Security Light inyusa ngokukhawuleza ukhuseleko kunye nokhuseleko ngokubonelela ngokukhanya okukhulu okukhanyayo kwe-80lm / watt. Ukongeza, yeyanamhlanje, inkangeleko enesitayile kunye nomgangatho wokungangeni manzi kwe-IP66 iyenza idibane kwindawo eyingqongileyo kwaye imelane nemozulu embi, ilungele usetyenziso lwangaphandle.
-Ewe, singumzi mveliso.
2. Ndingathenga iisampuli?
-Ngokuqinisekileyo.Sicela usithumelele umbuzo, ukuze sikuthumele isampuli.
3. Lithini ixesha lakho lokuhamba?
-Kuxhomekeke kubungakanani bomyalelo kunye nexesha kodwa ngokuqhelekileyo sinokuthumela ngenqanawa phakathi kweentsuku ezi-7-15.
5. Ithini indlela yokuthumela ngenqanawa?
-Inokuthunyelwa ngolwandle, ngomoya okanye ngokuvakalisa. Siza kukufumana eyona ikufaneleyo.Nceda uqinisekise nathi phambi kokuba uodole.
6. Ulenza njani ishishini lethu ixesha elide kunye nobudlelwane obuhle?
-a. Sigcina umgangatho olungileyo kunye nexabiso elikhuphisanayo ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayazuza;
-b. Sihlonipha wonke umthengi kwaye siqhuba ishishini ngokunyanisekileyo kwaye senze ubuhlobo kunye nabo.
Ngaphambili: 2021 Hot Die Cast Cast iAluminium ip66 ultra slim 10w 20w 30w 50w yangaphandle ekhokelela kwizikhukula ukukhanya
Okulandelayo: Ulawulo olungenacingo lwe-RGB Ukutshintsha Umbala we-Floodlight Smart Wifi i-LED ye-Flood Light